မႏၱေလးၿမိဳ. "ၾကင္းေတာ္ယန္" ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္း | Myanmar Online Ad Portal
Home » Business Directory » မန္တလေးမြို. “ကြင်းတော်ယန်” ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း
Email Address: jintawyan@gmail.com
Contact Number: 02-35121
Address: Block-320, Htin Win Quarter, Near Jetty, Chan Aye Thar San Township, Mandalay, Myanmar.
Listed: October 21, 2013 8:53 am
ခန့်ညားထည်ဝာသော ကြင်းတော်ယန် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းတော်ကြီးသည် မန္တလေးမြို့၊ ဧရာဝတီမြစ်ဘေး ကမ်းနားလမ်းပေါ်တွင် သင့်တောင့်တင့်တယ်ဖြင့် ခန့်ညားစွာတည်ရှိနေပြီး ဗုဒ္ဓတရားတော်မြတ်ကို လူသားများအတွက်ကောင်းကျိုးကောင်းရာ အဖျာဖျာကိုခံစားရပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များတိုးတက် ပြန့်ပွားလာစေရန်ဖြစ်ပေသည်။ ကြင်းတော်ယန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကို နွေးထွေးစွာ ဖြင့်ကြိုဆိုလျက်ပါသည်။
ကြင်းတောယန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပရဟိတအသင်းမှ ကုသိုလ်ရေး ဝန်ဆောင်မူများ
* မွေးနေ့ အခန်းအနားပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း
* မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း
* ရက်လည်၊ နှစ်ပတ်လည် အန္တရယ်ကင်း ဆွမ်းကျွေးပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း
* သင်တန်း ဆင်းပွဲများ၊ ကုမ္ပဏီ အစည်းဝေးပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း
* မိတ်ဆုံစားပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း
အထူးဝန်ဆောင်မှု။ ။ အရာသာထူးကဲသော သားသတ်လွတ် စားပွဲများ စီစဉ်ပေးနိုင်ပာသည်။
ဆက်သွယ်ရန် –> Phone: 02-35121
Please like & support us –> https://www.facebook.com/jin.taw.yan
Ad Reference ID: 43952654478c44c9
Listed by: maxyang
Other items listed by maxyang
Latest items listed by maxyang »
All times are GMT 6.5. The time now is 12:37 am.